विचित्र संसार Archives - Page4of 19 - Nepal News, News from Nepal, Online News from Nepal, Nepali News, Political, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Credit, Vehicle, Bank, Entertainment, Nepali Movie, Songs, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, Nepali Filmi News, Poems, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale
एक महिलाले पेटमा हरेक रात प्लाष्टिक बाँधेर सुत्थिन, नतिजा आउँदा महिला आफै चकित बनिन्
एक महिलाले पेटमा हरेक रात प्लाष्टिक बाँधेर सुत्थिन, नतिजा आउँदा महिला आफै चकित बनिन् सोसल साइटमा कोलिन नामकी महिलाद्वारा सेयर गरिएको फोटो भाइरल भइरहेको छ । यो पोष्टमा कोलीनले दिएको जानकारी अनुसार उनले तीन सन्तानलाई जन्म दिएपछि उनको फिगर नराम्रोसँग बिग्रिएको थियो । आफ्नो शरिरलाई फिर्ता पाउनका लागि उनले चमत्कारिक तरिका अपनाए । यो तरिकालाई…..
अष्ट्रेलियाकी एक महिला अहिले चर्चामा छिन् । ३९ वर्षकी ग्वाइनेथ मन्टेनग्रो आफ्नो द सेक्रेट ट्याबु नामको किताबमा गरिएको खुलासाका कारण चर्चामा आएकी हुन् । पेशाले यौनकर्मी रहेकी ग्वाइनेथले आफ्नो किताबमा यौनपेशामा रहँदा पछिल्लो १५ वर्षमा आफुले हासिल गरेका अनुभवलाई सँगालेकी छिन् । उनले यस किताबमा एक सफल यौनकर्मी बन्ने टिप्सहरु पनि प्रस्तुत गरेकी छिन् ।…..
भाग्यमानी युवक, जसले अनौठो नामकै कारण पुलिसमा जागिर पाए
नाममा पनि केही खास हुँदोरहेछ । इण्डोनेसियामा भएको एउटा घटनाले चाहीँ यसको पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ एकजना युवकलाई उसको अनौठो नामका कारण नै पुलिससँग काम गर्ने मौका मिलेको छ । ती युवकको नाम पोलिसी (Polisi) हो । इण्डोनेसियाको पुलिसलाई पनि पोलिसी नै भनिन्छ । एकपटक स्थानीय पुलिसले उक्त युवकलाई लाइसेन्स विना गाडी चलाइरहेको अवस्थामा…..
तुर्काउनका लागि किन टायर वा रुखको फेद नै खोज्छ कुकुरले ?
हामीले प्रायः कुकुरले रुखको फेँद वा गाडीको टायरमा पिसाब तुर्काएको देखेका छौँ । यो सामान्य कुरा लाग्छ हामीलाई । तर के कहिल्यै यसको कारण जान्ने कोसिस गर्नुभएको छ, कि आखिर किन कुकुरले पिसाब गर्नका लागि रुखको फेँद वा टायर नै खोज्छ होला ? कुकुरलाई चाहे जतिठूलो खुल्ला ठाउँमा छाड्नुस् उसले पिसाब गर्नका लागि कुनै रुखको…..
Page4of 1 « Previous 123456… 19 Next »